पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित जितको अबिर लाइरहँदा उही सामान्य पोशाक ढाकाटोपी, सेतो पाइजामा, सुरुवालमा थिए । अनि थियो मुहारमा मन्द मुस्कान । बढी त उत्तेजित थिए उनलाई चाहनेहरू । स्वभाविक रूपमा पण्डितप्रति देशविदेशको नजर थियो । पण्डितप्रति जनताको लगानी थियो । उनको कस्तो परिणाम आउने हो, आतुर उनलाई चाहनेहरू रातभर सुतेनन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा जनपक्षीय काम गरेर इमान्दार छवि बनाएका नेकपा एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य पण्डित चुनावी मैदानमा उत्रँदा देशविदेशबाट आर्थिक सहयोगको लर्को लाग्यो । चुनावमा लाखौं–करोडौं खर्च गरे मात्र चुनाव जित्न सकिने मनोविज्ञान र चुनावी व्यवस्थापनमा स्वभाविक रूपमा आइपर्ने आर्थिक भारका कारण पण्डितलाई सहयोग आवश्यक थियो ।
उनका फ्यानले विदेशबाटसमेत पैसा पठाए । देशमै हुनेले पनि सहयोग गरे । पार्टीले पनि केकति सहयोग गर्यो । राम्रो जनमत, इमान्दार छवि र मिडियाका कारण पनि लालबाबु चम्के । अन्ततः उनले नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालालाई ६ सय ७५ मतान्तरले पराजित गरे ।
जनमत र सहयोगका कारण लालबाबु चुनाव जित्नेमा ढुक्क थिए । त्यही उच्च आत्मबलका कारण मिडियामा पनि उनले डा. कोइरालालाई ४५ सय मतान्तरले हराउने दाबी गरे, यद्यपि उनको यो विश्वासमा केही तलमाथि देखिए पनि उनी विजेता बने । उनको जितमा थप केही सकारात्मक पक्ष पनि थिए । विगतका उमेदवारले केही काम नगरेको मतदातामा निराशा थियो । स्वच्छ छविका पण्डित चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि एक प्रकारले मतदाता उनीप्रति आशावादी हुने नै भए । त्यो सद्भाव पनि पण्डितलाई जिताउने ‘फ्याक्टर’ रह्यो । पण्डितले पनि आफ्नो जितको स्पष्ट आधार मन्त्री हुँदा गरेको कामलाई नै मानेका थिए ।
किल्ला तोडे, वचन नतोडुन्
लालबाबु पण्डितले नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक गढ र कोइराला खानदानको विरासतका रूपमा रहेको क्षेत्रलाई आफ्नो जितसँगै तोडिदिए । कोइराला परिवारका र नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालालाई पराजित गरेपछि मोरङ कांग्रेसी किल्ला रहिरहेन ।
जितको रातो रंग लगाएपछि मत माग्ने क्रममा जनतामाझ गरेको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । पण्डितले अब मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास लिए । आफूले जितेको क्षेत्रमा विकास गर्ने वाचा गरे ।
सर्लाहीमा जन्मेर मोरङलाई कर्मक्षेत्र बनाएका पण्डित ट्रेड युनियन पृष्ठभूमिबाट एमालेको मूल राजनीतिमा उदाएका हुन् । ०५१ र ०५६ को प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका उनले सामान्य प्रशासन मन्त्री भएका बेला भ्रष्टाचार विरुद्धको कानुनी कारबाही अघि बढाए । पीआर, डिभी र विदेशी नागरिकता सरह लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरे । विदेशी नागरिकता भएकालाई सरकारी जागिर नदिने कानुन निर्माण गरे ।
उनको यो कदमलाई नेपाली जनताले प्रगतिशील र मुलुकको हितमा स्वीकार गरे । पण्डितको यो कदमले नै उनलाई राष्ट्रिय उचाइ दियो । उनी जनतामाझ प्रिय बने । पण्डितले गरेका सबै प्रतिबद्धता उनले पूरा गर्छन् भन्ने जनतालाई आशा छ । नेतामा जनविश्वास गुम्दै गएका बेला प्रगतिशील पण्डितले नयाँ आशा, भरोसा, विश्वासको विजारोपण गरे । उनले कांग्रेसको किल्ला त तोडे अब वचन नतोडुन् । जनताको आशा नै यही हो ।
लड्डु पनि त खुवाउनै पर्यो नि ?
उच्च मनोबलका साथ चुनावी मैदानमा खटिएका लालबाबु पण्डितले कहीँकहीँ त गज्जबै बोले । जित सुनिश्चित रहेको आत्मविश्वास उनको बोली र अनुहारको आभाले प्रष्ट देखाउँथ्यो । थप उनलाई चाहनेहरूको सदभावले र प्रत्यक्ष रूपमा उनलाई दिनरात सघाउनेको कार्यकर्ताको कसरतले ।
पण्डितका विकास निर्माणका प्रतिबद्धता चाहिँ छँदैछन् उनले ती पूरा गर्छन् । तर, तत्कालै पण्डितले पूरा गर्नुपर्ने एउटा प्रतिबद्धता भने कतिबेला पूरा होला भनेर जान्न जनता आतुर छन् । आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी डा. कोइरालालाई निवासमै गएर विजयको लड्डु खुवाउने पण्डितको रहर र प्रतिबद्धता थियो ।
मत माग्न जनताका घरदैलोमा जाने बेला पण्डितले भनेका थिए, ‘देश–विदेश सबैतिर म परिचित छु तर डा. कोइरालाले मलाई चिन्नु भएको रहेनछ, विजयी भएपछि साइकल चढेरै कोइराला निवास पुग्छु र उहाँलाई सबैभन्दा पहिले लड्डु खुवाउँछु अनि भन्छु, लालबाबु पण्डित भनेको मै हुँ ।’
डा. कोइराला हवाई जहाज चढ्ने तर आफू साइकलमा हुइँकिने नेता भएकाले कोइरालाले चिन्न नसक्नुलाई स्वभाविक ठट्यौलीका रूपमा लिए । तर पण्डितले कोइरालालाई लड्डु कतिबेला खुवाउने हुन । सर्वसाधारण आतुर छन् । त्यसबीचमा के होला ? पण्डितका फ्यानसँगै सर्वसाधारण पनि उत्सुक छन् । मिडिया पनि उत्सुक छ ।
विजयी भएपछि पनि संचारकर्मीको उत्सुकतामा पण्डितले कोइराला निवासमै पुगेर लड्डु खुवाउने बताए । संचारकर्मीसँग उनले भने, ‘उहाँले मलाई चिन्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो, अब समय मागेर घरमै गएर पहिला चिनजान गर्छु ।’
लालबाबु पण्डितलाई समर्थन गर्दै एकजना फेसबुक प्रयोगकर्ताले लेखे– क. लालबाबु पण्डितलाई चिन्दिन भन्नुहुने शेखर कोइरालालाई मोरङका जनताले नै चिनेनन्, कठै । अब ५ वर्ष आफ्नो परिचय खोज्नुहोला ।
अर्का एकजनाले लेखे– नेपालमा अझै पनि इमान्दारिताको राजनीति टिक्छ भन्ने दरो प्रमाण । बधाई लालबाबु पण्डित ।
सबैको नजर अहिले पण्डितको कदमतिर छ, लड्डु कतिबेला खुवाउने हुन् । त्यसैपनि लड्डु जित, खुसीयाली, सफलताको प्रतीक हो । तर लड्डु बढी गुलियो हुने भएकाले सबैले खान सक्दैनन् – हेक्का रहोस् लड्डु सुगर फ्री (गुलियारहित) पनि बजारमा पाइन्छ ।